आईतबारको दिनमा यसो गर्नाले मनोकामना पुरा हुनुका साथै शुख,शान्ति,संबृद्धी प्राप्त हुने ! - Sabal Post
आईतबारको दिनमा यसो गर्नाले मनोकामना पुरा हुनुका साथै शुख,शान्ति,संबृद्धी प्राप्त हुने !
आइतबारको दिन नुहाउनु अगाडी सुर्यको दर्शन गरी स्नान गर्नुहोस। २, आइतबारको दिन सुर्य अस्ताउनु अगाडी नुनको प्रयोग गर्नु हुदैन।३, आइतबारको दिन मासु र मदिरा सेवन गर्न हुदैन। ४, आइतबारको दिन कपाल काट्नु हुदैन।५, आइतबारको दिन सर्स्युको तेलले मालिश गर्नु हुदैन। आइतबारको दिन तामाको भाडाको किनबेच नगर्नुहोस्। तपाईले यति नियम आइतबारको दिन पालना गरेमा तपाइको मान-सम्मान र धन वृद्धि हुन्छ।bजुन घरमा यस्ता क्रियाकलाप गरिन्छ त्यो घरमा लक्ष्मीको वास हुन्छ, जानकारी लिनुहोस
एजेन्सी – हिन्दु धर्मसँग जोडिएका केही यस्ता परम्परा वा काम छन्, ती कुरा ध्यान दिदा भगवान्को कृपा प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। ती कामको प्रभावले गर्दा कहिलै दुख वा पीडाको सामना गर्नु नपर्ने विश्वास गरिन्छ। घरमा धन धान्यको कुनै पनि कमी नहुने धार्मीक विश्वास छ।जानिराखौँ ती काम:
तुलसी- तुलसीलाई शक्ति स्वरुपा मानिने गरिन्छ। जुन घरमा तुलसीको पुजा हरेक दिन हुने गर्दछ, उसको घरमा केही कुराको कमी नहुने विश्वास गरिन्छ। तुलसी रोप्दा घरमा प्रवेश गर्ने हावा पनि अमृत समान हुने गर्दछ। जुन व्यक्तिले बिहान चाडै उठेर तुलसीलाई जल चढाउछ, उसमाथि सधै विष्णु भगवानको कृपा रहने विश्वास गरिन्छ।
गोबर – गाईको गोबरलाई निकै पवित्र मानिने गरिन्छ। महाभारतको अनुशासन पर्वका अनुसार गाईको गोबर महालक्ष्मीको निवास हुने गर्दछ। त्यसैले जुन ठाउँमा गाईको गोबरले पोत्ने गरिन्छ, त्यो ठाउँ पवित्र हुने गर्दछ। साथसाथै माता लक्ष्मीको कृपा पनि मिल्ने गर्दछ।
मन्दिर – पश्चिम दिशा तर्फ मुख फर्काएर पुजा गर्नु अत्यन्तै शुभ मानिन्छ। त्यस्तै मन्दिरको ढोका यदी पूर्व दिशामा भए छन् राम्रो हन्छ। प्रवेश द्धारको ठिक अगाडि ईश्वरको मुर्ति भने कहिलै राख्नु हुँदैन्। घरमा मन्दिरको स्थापना गर्दा सबै भगवानको कृपा मिल्ने विश्वास गरिन्छ।
ईपिएसमा पास हुनेको स्वास्थ्य परीक्षण आजदेखि शुरु
कोटेश्वर चोक नजिकै शंकास्पद वस्तु फेला
धेरै खुसी हुन्छ प्रेममा परेको मान्छे
जिसन गायन प्रतियोगिता सिजन ७ र जिसन…